Buy OFFICE RENT (ID-25) (18Lks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
OFFICE RENT (ID-25)
ရောင်းချသူ: Angel Real Estate
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 104ရက်​
1250 sqft office space for rent in Kamaryut Township, near San Yeik Nyein Gamone Pwint. Office has hall room, five rooms and bath-room. Four air-conditioners are already included.
Monthly Rent Price - 18 Lks (Nego)
၁၂၅၀ စတုရန်းပေအကျယ်ရှိသော ငှားရန်ရှိသော ရုံးခန်းစ်ြပါသည်။ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ စံရိပ်ငြိမ် ဂမုန်းပွင့်အနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ဟောလ်ခန်း၊ အိပ်ခန်း လေးခန်းနှင့် ရေချိုးခန်းများဖွဲ့စည်းပါရှိပါသည်။ လေအေးပေးစက် လေးလုံး အသင့်တပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။
ရုံးခန်း၏ လစဉ်ငှားရမ်းခ - ၁၈ သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
Condo Room For Rent @ Lower Puzu...
Apartment for Rent in Sanchaung...
Rent for condo
Big, Bright & Cozy 3BDR Cond...
အမည်: OFFICE RENT (ID-25)